"YEMEN WAXA EY TAAGEEREYSAA SHIRKA NABAD-RAADINTA SOOMAALIYA EE KENYA"
Sidaas waxaa yiri wasiirka Arimaha Dibadda ee dowladda YEMEN Dr. Abuubakar Al-qirbi oo wareysi gaar ah oo uu siiyay jariidada ku hadasho Afka ciidanka xooga dalka yemen ee lagu magacaabo 26september kusheegay in yemen ay aad iyo aad ugu dadaaleyso inuu guuleysto shirka nabadeeynta Soomaaliyeed ee lagu qaban doono bisha soo socoto bartamaheeda kenya.
Wareysiga wasiirka oo kusoo baxay cadadkii shalay ee jariidada ayuu Wasiirku ku sheegay sida ey yemen ugudadaaleyso nabadeynta soomaaliya Iyo waliba dhameynta dhibaatada heysato shacabka soomaaliyeed ee aan Walaalaha nahay uuna naga dhaxeeyo xiriir taariikhi ah ayuu yiri wasiirka Isagoo intaa ku daray in ey jiraan kumannaan qaxooti soomaaliyeed ah oo Kunool yemen.
wasiirka ayaa intaas ku daray sida ey Yemen ugu dadaaleyso Siiwadida Kaalinteeda ku aadan nabad raadinta soomaaliya, iyadoo mar walba la xiriirta Dhinacyada wado nabad raadinta soomaaliya si ey ugala shaqeyso Arimahooda ku aadan soomaaliya.
Sida la ogyahay madaxweynaha yemen wuxuu kamid ahaa madaxdii ka qeyb Gashay caleema saarkii madaxweynaha DKM ee soomaaliya, C/qaasin Salaad Xasan, Ayadoo uu madaxweyne Cali C/lla Saalax uu Munaasabad walba kaga hado soomaaliya iyo sida ay u jecel yihiin hadey Yihiin reer yemen in ey Arkaan soomaaliya oo mar labaad isku taagtay Lugaheeda iyo shacabka soomaaliyeed oo ka baxo dhibaatada uu kujiro 12-sano helana nabad gelyo taam ah.
Abuukar Yaasiin Xaaji Daahir
WARARKII HORE YEMEN
YEMEN- Xafiiska UNHCR ee Sanca ayaa shalay subax soo gaba gabeeyay Bixinta kaararka aqoonsiga qaxootinimo oo loo qaybiyey Soomaalida.. GUJI.. Agoosto 8
Wararka ka imanaya Yemen ayaa sheegay in ladiley Soomaali lagu magcaabo C/Shakuur Aadan kadib markii lagu dhex toogtey.. GUJI. 30/6
WARQAD KASOCOTO MADAXWEYNAHA DKG OO SOO GAARTAY MADAXWEYNAHA DALKA YEMEN GUJI....
QAXOOTI YEMEN KUSUGNAA OO LOO CELIYEY WADAMADOODII GUJI...
KULAN DHEXMARAY WAFDI KASOCDAY DKG EE SOOMAALIYEED IYO KU XIGEENKA GUDOOMIYAHA BAARLAMAANKA DOWLADA YAMAN GUJI...
Wasiirka A/DIBADA dowlada yaman oo gudoomay waraaq katimid M/weynaha DKMG kuna socotay Madaxweynaha Dalka Yaman GUJI....
NIN ISKU QARXIYAY MAGAALDA SANCA GUJI....
DOWLADA YAMANTA OO BEENISAY EEDEYMAHA EY USOO JEEDIYEEN KOOXAHA MUCAARADKA AH EE SOOMAALIYEED GUJI....
QAXOOTIGA SOOMAALIDA YEMEN
10 Soomaali ah oo Midkiiba ay Kenya Kuxukuntay Sh60,000 Ganaax ah GUJI...